eNasha.com - क्रोध
के को क्रोध हो यो ?
वर्षकै सर्वाधिक सफल चलचित्र नामाङ्कित 'क्रोध'ले नेपाली चलचित्रका दर्शकका लागि केही नौलो स्वाद पस्किएको छ । निखिल उप्रेतीले निर्माण गरेको पहिलो चलचित्र 'सावधान' ले सुरु गरेको अपत्यारिला दृश्यहरुलाई कम्प्युटर एनिमेशनद्वारा ठूलो पर्दामा देखाउने चलनलाई एक कदम अघि बढेर निर्देशक आकाश अधिकारीले शरीर भ्वाङ पारेका छन् । धरहराको टुप्पोबाट दुइ नायकहरु हावामा कावा खाँदै झरेको देखाएका छन् । नेपाली चलचित्रका दर्शकले यसअघि यस्ता दृश्य कहीँ कतै देखेका थिएनन्, त्यसैले कतिपय दर्शकहरु ८/९ पटक यो चलचित्र हेर्न सिनेमा हल पुगेको पनि देखियो । यो एक किसिमका दर्शकको कुरा हो ।
अर्को किसिमका दर्शकहरु सिनेमामा तर्क खोज्छन्, जो शायदै नेपाली सिनेमा हेर्न जाँदा हुन् । तिनले सोध्ने वा उनीहरुको मनमा उठ्ने गरेको प्रश्न चाहिँ के हुन्छ भने अंग्रेजी चलचित्र 'र्टर्मिनेटर' र त्यसपछिका श्रृंखलाले शुरु गरेको भुँडी छेडिएर पछाडिको दृश्य देखिने छायाँ त तर्कसङ्गत छ तर 'क्रोध'मा त्यसैगरी भुँडी छेडिएर पछाडिको दृश्य कसरी देखिन्छ ? पूरा सिनेमाको हेर्न लायक दृश्य यही छ र यही दृश्यमा दर्शकहरुले औँलो ठड्याउँछन् ।
कथा साधारण छ । जवान छोरो (धिरेन शाक्य) तल्लो आर्थिक हैसियत भएकी अबला (जल शाह) लाई मन पराउँछ तर आमा (शान्ति मास्के) त्यसको विरुद्धमा छिन् । अझ एक कदम अघि बढेर उनी अर्की सबला (शुभेच्छा थापा) को बिहेको प्रस्ताव छोरोलाई दिन्छिन् । यदि बिहे गर्न नमाने झुण्डिएर मर्ने धम्की पनि दिन्छिन् । कर्तव्यमा परेर छोरोले बिहे त गर्छ तर अघिल्लो मन पराइएकी तर भित्र्याउन नपाइएकी अबलाबाटको छोरो (निखिल) यही कारण आफ्नो बाबुलाई निकै घृणा गर्छ । पछि अर्की श्रीमतीबाट पनि अर्को छोरो (आकाश अधिकारी) जन्मिन्छन् र अन्तिम समयसम्म दुवैबीच ठूलो द्वन्द्व र घृणा जमिरहन्छ । चलचित्रको अन्त्यमा खलपात्रहरुले आमाहरुको अपहरण भइसकेपछि जिन्दगीभरको घृणा एकै पटकमा पखालिन्छ ।
चलचित्रको कथाको जग घृणा हो, जसमा निखिल आफ्नी आमाले जिन्दगीभर बुवाको न्यानोपन पाउन सक्दैन । अर्कोतर्फ आकाश पनि आफ्नो बुवाको कार्यशैली मन पराउँदैन । त्यसैले उ आफ्नो बुवालाई घृणा गर्छ । त्यही घृणा र रिस नै चलचित्रमा द्वन्द्वको कारण बनेको छ । जसले सिनेमाभरि फाइटै फाइट घुस्न पुगेको छ ।
कथा आकाश अधिकारीले नै लेखेका छन् । तर उनी कथा लेखन कच्चा छन् भने एउटै शहरमा २०/२५ वर्षबसिरहेका दुइ सौताबीच कहीँ कतै भेट भएको देखाइँदैन र सौतासौताका छोराछोरीबीच पनि कतै भेट हुँदैन । यस्तो पनि कहिँ हुन्छ ?
सिनेमाको रोचक पक्ष अर्का निखिल (चलचित्रमा भोला) को छ । उनी यस्तो खलपात्र भएर निस्कन्छन् जसलाई तह लगाउन नायकहरुलाई पनि धौधौ पर्छ । पैसाको लागि अर्काको ज्यान लिने उसको धर्म बनेको छ । चलचित्रमा दुइ निखिलहरुबीचको फाइटको दृश्यले दर्शकमा थोरै रोचकता पैदा गरेर पैसा कमाए पनि चलचित्र चलाउन हल्ला गरिएको 'भ्रष्टाचार विरुद्धको क्रोध' लाई कहिँकतै प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिएको छैनन् ।
अहिलेकी सर्वाधिक व्यस्त नायिका रेखा थापा र संघर्सशील नायिक उषा पौडेल दुइ नायिका भए पनि नीहरुका लागि गर्न लायक कुनै पनि दृश्य, संवाद या अभिनयका लागि ठाउँ दिइएको छैन । यो चलचित्रले तिनलाई न त फाइदा पुर्‍याएको छ न त घाटा नै ! महिलामाथिको विभेद वास्तविक जीवनमा मात्र नभएर पर्दाको जीवनमा पनि देख्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा दुःख त जल शाहको बढ्दो शरीर र उनको घट्दो चलचित्रे भूमिकामा लाग्छ । उनको यो चलचित्र हेरेपछि उनी विदेशिनुको एउटा ठूलो सत्य प्रष्टिन्छ कि उनी कसरी चलचित्र उद्योगमा आवश्यकताहीन भएकी रहिछन् ! उनीजस्तो प्रतिभाशाली अभिनेत्रीका भागमा मात्र पाँच दृश्य परेको छ र त्यसमा उनले अभिनयको कुने जादू छर्न पाएकी छैनन् ।
समग्रमा क्रोध एउटा साधारण नेपाली चलचित्र हो । जसलाई केही एनिमेशनका दृश्यले नयाँपन दिने प्रयास भएको छ । त्यही नयाँपनले नै निर्माता तथा निर्देशक आकाश अधिकारीले आफ्नो अघिल्लो सिनेमा पंक्षीमा भएको घाटा उठाएका छन् ।
नवीनता रोचक क्या बात ! कन्ट्रोभर्सी फिल्म फेस्टिबल सोच अभिनेत्री निर्देशक घोषणा ग्ल्यामर पेज3अभिनेता पार्टी कार्यक्रम रोमान्स सेक्स सञ्चारकर्मी प्रविधि